Ny foko Albaney no tompon’ny fanapahan-kevitra amin’ny fifidianana filoham-pirenena ao Makedonia Avaratra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Mey 2019 5:45 GMT
Vakio amin'ny teny Shqip, Ελληνικά, Français, Español, Italiano, English
Ity tantara ity dia niseho voalohany tao amin'ny Meta.mk News Agency, tetikasan'ny Metamorphosis Foundation. Navoaka etsy ambany ny dika nasiam-panitsiana izay tafiditra ao anatin'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Ny kandidà Sosialy Demokraty, Stevo Pendarovski, no nitarika tamin'ny fihodinana voalohany tamin'ny 42,81 isan-jaton'ny fitambaran'ny vato: ny mpifaninana aminy , Gordana Siljanovska Davkova avy ao amin'ny VMRO-DPMNE kosa nahazo 42.25 isan-jato, izany hoe elanelanam-bato 4 486 fotsiny.
Io no elanelam-bato kely indrindra teo amin'ireo kandidà roa izay tafiditra fihodinana faharoa tamin'ireo fifidianana filoham-pirenena dimy tany Makedonia Avaratra.
Tamin'ny fanehoana fanohanana, nanome kifafa ho toy ny fanomezana ho an'i Zaev nandritra ny famoriam-bahoaka ilay mpilalao sarimihetsika Dragan Spasov, fantatra amin'ny hoe Dac. Tamin'ny volana Janoary 2018, nametra-pialana tsy ho tale vonjimaika ao amin'ny Teatra Nasionaly i Dac rehefa nahatonga lozam-piarakodia izay naha-voadoana tovovavy iray, saingy tsy naratra mafy. Nilaza izy nanomboka teo fa tokony arahin'ireo manampahefana rehetra ny ohatra asehony amin'ny andraikitra ara-politika.
Ny fiheveran'ny governemanta dia hoe nisy ny fahadisoam-panantenana tamin'ny tantara ratsy vao haingana momba ny kiantranoantrano rehefa nanendry ireo havana tamin'ny asa ao amin'ireo orinasam-panjakana ireo mpikambana ao amin'ny parlemanta sy ny minisitra. Tamin'ny 25 aprily, nandidy ireo havana toy izany i Zaev mba hametra-pialàna amin'ny toerana misy azy ireo.
Etsy ankilany, manana ny heviny hafa ireo manampahefana ao amin'ny mpanohitra VMRO-DPMNE. Nilaza ireo manampahefany fa hiteraka tsy fahafalian'ny vahoaka ihany koa ny voka-pifidianana noho ny Fifanarahana Prespa, izay nanova ny anaran'ny firenena ho Makedonia Avaratra ary namarana ny fifanolanana naharitra 27 taona tamin'i Gresy, izay toherin'ny VMRO-DPMNE mafy.
Nahatonga ireo mpanao sonia, ny Praiminisitra Makedoniana Zaev sy ny namany Grika, Alexis Tsipiras ho voatendry tamin'ny Loka Nobel ho an'ny Fandriampahalemana ny fifanarahana. Nilaza matetika i Siljanovska fa tokony handresy izy, tsy hampiasa ny anarana hoe Makedonia Avaratra ny governemantany.